पत्रपत्रिकाको खबर Archives - Page5of 50 - www.kchhakhabar.com
केपी ओलीले भने-माधव नेपाल उत्तर कोरिया गएको मलार्इ थाहा छैन
काठमाडाैं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विादास्पद उत्तर कोरिया भ्रमणबारे तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको औपचारिक जानकारीविना व्यक्तिगत हैसियतमा नेता नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेको बताउँदै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । पार्टीको संस्थागत निर्णयबाटै माधवकुमार नेपाललाई पठाउनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले माधव नेपालजी उत्तर कोरिया जानुभो । त्यो ...
आयल निगम फेरि अर्को लफडामा, लाग्यो यस्तो अारोप
काठमाडौं । नेपालमा उडान गरिररहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपाल आयल निगमबाट बिक्री भइरहेको हवाई इन्धन गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाएका छन् । खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईबाट उडान भर्दै आएको फ्लाई दुबई, सारजहाबाट उडान भर्दै आएको एयर अरेबिया, अबुधाबीबाट उडान भर्दै आएको इतिहाद एयरवेज र कतारको दोहाबाट उडान भर्दै आएको कतार एयरवेजले आयल निगमसँग खरिद गरिने हवाई इन्धन गुणस्तरहीन भए...
इटहरी हर्ण निषेधित क्षेत्र – एक महिना नबित्दै लथालिंग : ट्राफिक जनचेतना शुन्य
इटहरी । सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले चासो नदिदा र बनाएको नीति नियमको कार्यनवयन पक्ष फितलो हुदा पूर्वको ब्यापारीक केन्द्र इटहरी हर्ण निषेधित क्षेत्र घोणा भएको १५ दिनमै लथालिंग बनेको छ । पूृवाञ्चल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले गत साउन १६ गते नगरको मुख्य सडकमार्गलाई हर्ण निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो । राजनीतिककर्मी , बुद्धीजिवी एवम पत्रकारहरूको उपस्थितीमा एक औपचारीक कार...
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टर नपुगेपछि सरकारले डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरुमै दुई-दुई लाख नगद दिएको छ ।मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमा मात्रै ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालै थपिएका २३ राज्यमन्त्री र क्वार्टर अभाव भएका आठ मन्त्री गरी ३१ जनाका लागि ६२ लाख खर्च भएको हो । बाहिर डेरामा बस्ने मन्त्रीहरूले मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत छुट्टै पाउनेछन् । सुविधा छ...
भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसको अड्डी, निर्वाचन कानुन अलपत्र
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसदमा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ । सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजा...
बाढी क्षेत्रमा बिरामीको बेहालः न अाैषधि, न खानेकुरा
केही दिनअघि राप्तीमा आएको बाढीले उनको घर बगायो । सरकारले राहत भन्दै सात दिनपछि ४० किलो चामल दिएको थियो । त्यो पनि सकियो । एउटा त्रिपाल टाँगेर उनीहरु अहिले त्यसैमा दिन काटिरहेका छन् ।१७ भदौ, काठमाडौं । राप्ती सोनारी गाउँपालिका ६ की कुकुरी थारुलाई हनहनी ज्वरो आएको दुई हप्ता बितिसक्यो । न औषधि छ न घरमा खानेकुरा नै । घरमा उनीमात्रै होइन, आठैजनाको परिवार सबै बिरामी परेका छन् । कसैलाई खोकीले सताएको छ, क...
१७ भदौ, काठमाडौं । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनताले दुई वर्षदेखि सहुलियतको चामल र नुन खान पाएका छैनन् । केरुङ नाकाबाट तिब्बतको बाटो हुँदै खाद्यान्न लगिने गरेकोमा कर बढाइएको भन्दै ठेकेदारले खाद्यान्न ढुवानी गरेका छैनन् । उपल्लो डोल्पाका लागि आर्थिक वर्ष ०७२–७३ देखि छुट्याइएको ३८ सय क्विन्टल चामल र तीन हजार क्विन्टल नुन काठमाडौंकै गोदाममा थन्किएको ठेकेदार विजय रोकाले बताए । पछिल्लो समय केरुङ ...
अर्थ समितिमै थन्किए स्थानीय तहका ४ कानुन
१५ भदौ, काठमाडौं । वित्त आयोगबारे देखिएको अन्योलले स्थानीय तह शासन सञ्चालन गर्न बनेका ४ वटा कानुन अर्थ समितिमै रोकिएका छन् । स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह आर्थिक कार्यविधि, स्थानीय तह राजस्व कार्यविधि, स्थानीय तह खरिद कार्यविधि र स्थानीय तह कार्यसम्पादन कार्यविधि रोकिएका हुन् । यी सबै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि बनाइएका नयाँ कानून हुन् । संविधान अन...
गुटैगुटले जेलिँदै कांग्रेस, पदको बार्गेनिङ गर्न गुट बनाउने होड
१५ भदौ, काठमाडौं । जेठ २४ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ हुनै लाग्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यक्रममा सहभागी नहुने खबर पठाए । सभापतिले मनोमानी पारा देखाएको भन्दै उनले विरोध गरे । मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नोतर्फबाट ४० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने उनको माग थियो । देउवाले मन्त्री चयन पछि गर्ने जानकारी गराएपछि उनी शीतलनिवास गए । यी दुई घटनाले कांग्रेसभित्रको गुटग...
१५ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई स्वाइनफ्लु भएको छ । उनलाई एन्फ्लुएन्जा ए पोजेटिभ भाइरस (एच१ ए)न १) पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए । पोखरेल एक हप्तादेखि वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । गिरीका अनुसार दुई दिनअघि स्वाइनफ्लुको आशंकामा खकार परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो । उनलाई फिजिसियन डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ न...